सुरक्षा स्थितिको चिन्ता | eAdarsha.com
सुरक्षा स्थितिको चिन्ता
१. चुनावमा सुरक्षाको स्थिति अझै चुनौती बनेको छ। भय र त्रास रहित वातावरणमा निर्वाचन स्थलसम्म पुग्नु र स्वतन्त्रतापूर्वक मतदाताले मतदान गर्न पाउनु मतदाताको नैसर्गिक अधिकार हो। तर देशको विभिन्न स्थानमा विभिन्न किसिमको बमको प्रयोगले मतदाताहरुले आफ्नो त्यो अधिकारको प्रयोगमा असहजताको अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था छ।
२. सञ्चार माध्यमले सुरक्षाको स्थिति सुधार्नु पर्ने विषयमा धेरै लेखिसकेका छन्। कतिपयले त्यसलाई चिन्ताजनकसमेत भनेका छन्। हामीले पनि पटक-पटक त्यसबारे लेखेका छौं। चुनावको शुरुआती दिनदेखि नै त्यसबारे चर्चा भएता पनि स्थितिमा सुधार आएको छैन। कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारलाई नै लक्ष्य गरेर बम पड्काइएको देखिन्छ।
३. निर्वाचन आयोगले ढुक्कसँग निर्वाचन गर्न भनेको छ। त्यस आयोगले पटक-पटक सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर स्थितिमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेको छ। त्यसले एक दुर्इ पटक मात्र होइान, धेरैपटक सुरक्षा निकायको बैठक राखेको सार्वजनिक भएको छ। तर स्थितिमा अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन।
४. सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयले देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुधार्न शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएका छन्। जिल्ला-जिल्लाबाट चुनाव विथोल्ने घोषणा गरेका विप्लववादी कम्युनिष्टहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तैपनि स्थितिमा सुधार भएको छैन। अब ता निर्वाचनको मौन अवधि पनि शुरु भएको छ।
५. अब महत्वपूर्ण तीन दिन बाँकी छ। यो तीन दिन मौन अवधि भएकोले त्यसबेला सभा जुलुश आदि केही हुने छैन। तैपनि अनौपचारिक रुपले यताउता जाने, भेटघाट गर्ने काम भने हुने गर्दछ। फेरि बमको प्रयोग लुकीछिपी राती राख्ने गरिएको हुँदा तिनीहरुलाई यो मौन अवधिले पनि छेक्ने देखिँदैन।
६. चुनाव वहिस्कार गर्नेले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। सधैं यस्तै गरी बम बारुद पड्काएर मात्र हुँदैन रहेछ। देशलाई अझ कति समय अशान्तको स्थितिबाट गुजार्ने हो। राजनीतिक सिद्धान्तको नाममा देशलाई कति जीर्ण बनाउने – पहिलेका आफ्ना सहकर्मीहरुले किन शान्तिको बाटो अपनाए, त्यो पनि हेर्नुपर्दछ। शान्ति प्रक्रियामा आउनेले पनि आफ्ना सबै साथीहरुलाई समेटेर ल्याउन सक्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसक्नु उनीहरुको कमजोरी हो।
७. आजका मतदाता हिजोका जस्ता कमजोर छैनन्। हिजो सामान्य घटना भएमा पनि मानिसहरु डराउँथे र भाग्थे भने आज त्यो घटना कसले गरेकेा, किन गरेको भनेर सोधखोज गर्दछन्, वास्तविकता बुझ्छन्। मतदातामा आएको यो ठूलो परिवर्तन हो। मतदातामा आएको यो परिवर्तनलाई सम्बन्धित सबै पक्षले बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसमा पनि बहिस्कारवादी र बम बारुद पड्काउनेहरुले अरु बुझ्नु आवश्यक छ। मतदाताहरु शान्ति, सुरक्षा चाहन्छन्। आफ्नो मतको प्रयोग डर, त्रास विना स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न चाहन्छन्।